Microsoft ayaa hami weyn Windows 10 - boosteejo ah oo cross qalab-hoose-dhexe oo u oggolaan doonaa dadka isticmaala si ay u hagaagsan codsiyada ay guud ahaan qalabka kala duwan, ka desktop-dhaqameedyada iyo laptops in telefoonada gacanta, kiniiniyada iyo wearables. In yar ka hor, Microsoft billowday Windows 10 kombuyuutar. Users casriga u baahan doontaa inaad sugto ilaa December si ay kor hawlgalka nidaamka telefoonada ay hadda '(OS) ama heli Windows 10 casriga ah orod Mobile.
Haddii aadan weli ku saabsan casriyeeyo si Windows 10 Mobile neerfayaasha, halkan waxaa ah waxyaabo aad og tahay in ka hor inta casriyeeyo.
5 Features Key Updated for Windows 10 Mobile
5 Talooyinka Windows 10 casriga
Sida lagu Helo ah Windows 10 Hagaaji Mobile
A feature runtii anfacaya ee Windows 10 Mobile waa isticmaalka app nidaam caalami ah - taasi ka dhigan tahay si fudud in app horumarinta barnaamijyadooda haatan dekedda ku qoran kartaa Windows 10 on PC ah in Windows 10 Qalabka telefoonada gacanta. Nidaamkan muhiimad ka dhigan tahay in Windows 10 app wax ordi karaan labada kumbiyuutarada iyo casriga ah.
2 macruufka iyo Android Apps Can iyo doono UNI-
Iyada oo duudduuban soo baxay Windows 10 Mobile, waxaad filan kartaa inaad aragto helitaanka barnaamijyadooda tayo dheeraad ah oo loogu talagalay telefoonka Windows. Tani waa sababta ugu sareysa ee app nidaamka caalamiga ah, Windows 10 Mobile ka dhigi doonaa fududeeyo app horumarinta in ay barnaamijyadooda dekedda ah ee macruufka iyo Androids in Windows 10 Mobile aan dib-u-sireed barnaamijyadooda si badan. Sidee oo xiiso leh waa in?
3 Windows 10 Mobile taxanaha
Your laptop aad u culus oo kubado badan oo hareerahaaga? Iyada oo la bilaabay ee Windows 10 Mobile, mar dambe ma aad u baahan doontaa in. Iyadoo feature taxanaha ay, aad haatan u beddesho kartaa Windows 10 telefoonka Mobile galay laptop ah mini ay u xidhiidhinaya keyboard iyo mouse ka, iyadoo interface ka shabaha interface desktop ah.
4 keyboard Better
Haddii aad u malayseen Windows Phone 8.1 ee Word Flow waa super laga cabsado, Windows 10 keyboard cusub iyo in la hagaajiyo Mobile aad ku soo gani doonaa dayaxa. Waxaad awoodi doontaa in astaysto keyboard si ay ugu ekaato farahaaga oo soc shaashadda in uu noqon doono ugu raaxo leh u gacmahaaga.
5 Default Camera Better App
Shutterbugs ku faraxsan yahay in la ogaado in app camera caadiga ah waxaa sidoo kale la casriyeeyay for Windows 10 Mobile doonaa. Waxay qaadan doontaa sawiro auto-qaadey, waxay bixisaa 4K video laga duubay, oo ay qabsadaan sawirada Mishiinkan Flash.
1 Ku rakib Your Apps on Qalabka All
Si loo kordhiyo wax soo saarka, soo dajiyo Windows 10 galay dhammaan qalabka aad socon Windows oo ay ku jirto barnaamijyadooda in aad si joogto ah u isticmaalaan. Sidaas, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan dhammaan xogta iyo faylasha aad ku dhammaan qalabka aad. Mar dambe u baahan tahay in aad iyaga u gudbiyaan u dhexeeya qalabka.
2 badbaadi Your Details
Haddii aad iska bedeleysid ka iPhone Apple ama telefoonka Android inay ka Windows Phone, hubi in aad wax Xusuusto ama badbaadin faahfaahin login aad u Chine oo dhan. Tan iyo Windows 10 Mobile ka dhigi doonaa gudoodnsiiyay barnaamijyadooda u dhexeeya OS sahlan, oo aad filan kartaa in ay isticmaalaan barnaamijyadooda la mid ah sida ay noqon doonto ka fudud loogu talagalay horumarinta u dhiska app ee Windows Phone ee la isticmaalo.
3 Dooro Response ah Automatic
Marka aad la dhiso xiriir la keyboard ama mouse ka, Windows 10 Mobile keeneysaa in aad si loo xaqiijiyo tallaabo aad. Tuur baahida loo qabo in la sameeyo waqti kasta oo ay xulashada jawaab toos ah - marka aad u dhigay ilaa, ma waxaad u baahan doontaa inaad u sameeyo waqti kasta oo aad keyboard iyo mouse xirmaan.
4 bar Word Flow
Waxaad samayn kartaa Word Flow xariifnimo by isticmaalka habkaani sida ugu badan ee aad awoodo. Habkan, oo aad si toos ah gelin kara erayada saxda ah iyo fogaado erayada autocorrected ceeb.
5 Isticmaalka Camera App in Translate Qoraallada
Mar dambe ma aad u baahan tahay in ay app turjumaad si aad u hesho Qoraallada turjumay halka aad ku socotay ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad hadda samayso waa abuurtaan camera default app, barta iyo biqil ee qoraalka aad rabto in aad u turjumaan. Tani gelin doonaa dhaawac yar processor aad telefoonka ee.
Microsoft 10 Mobile weli ka yar yahay horumarinta, laakiin taas macnaheedu ma aha in aadan heli karin gacmahaaga ku yaal hadda. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Insider waa version beta ee OS finalka in la sii dayn doono bisha December 2015. Waxaa la sameeyey gaar ahaan dadka isticmaala jecel in ay cusp ee technology iyo gacan looga Microsoft dhibta cayayaanka ee OS ah.
Ka hor inta aadan in quusin iyo rakibi OS beta ah, hubi in aad aragto haddii aad telefoon Windows waa la jaan qaada Kulanka Xiisaha Leh Insider - ahayn Mid ka mid ah HTC (M8) ee Windows, inta kale oo ka mid ah liiska waxaa ku nool tiro balaadhan oo ah telefoonada Lumia.
Halkan yihiin tallaabooyinka xiga in aad waa in la qaato marka la hubiyo waafaqsan aad telefoonka ee:
 U hubso in aad telefoon Windows waxaa socda on Windows Phone 8.1. Haddii aadan hubin, waxaad tagtaa Settings> About> Info .
 Isku soo qor Windows Insider Barnaamijka halkan .
 Download iyo rakibi app Windows Phone Insider ka Windows ka Store.
 app ayaa markaas iskaan doonaa Details telefoonka iyo idinku wadi doonaa sida iyada oo loo marayo hanaanka casriyayn ah.
Ha la xusuusto in ay jirto kara in OS uu noqon doono deganayn farun in aad Windows Phone. Haddii aadan run ahaantii casriga ah ugu xeel dheer, waxa heer sare ah ayaa lagu talinayaa in aad sugto kaliya Microsoft in uu hirgaliyo wax soo saarka ugu danbeeya. Waxaa laga yaabaa inaad in aanay noqon kuwa ugu horreeya ee la OS, laakiin wararka ugu weyn waa in Microsoft waxaa bixiya dadka isticmaala Windows 8.1 isticmaalaya qalabka si ay kor ay OS Windows in 10 Mobile bilaash ah!
Top 5 lyrics surin-in daaqado media player
> Resource > Windows > waxaad u baahan tahay ka hor Windows 10 Mobile Hagaaji